သင်၏ MacBook Pro ကိုမည်သို့ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရမည်နည်း ငါက Mac ကပါ
သင်၏ MacBook Pro (I) ကိုမည်သို့ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းရမည်နည်း။ SSD ကိုတပ်ဆင်ပါ
Applelizados နောက်လိုက်များကော။ ဤဆောင်းပါးနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးသွားသောသို့မဟုတ်ခေတ်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်သောခေတ်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ Mac၊ iPad နှင့် iPhone များ၏အားသာချက်များကိုယူရန်သင်ခန်းစာများစွာကိုစတင်ခဲ့သည်။
1 အသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ် SSD နှင့်အတူ MacBook repowered
အသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ် SSD နှင့်အတူ MacBook repowered
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသည့်အခါတိုင်း၊ အသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်သင့်၊ မသင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားမေးကြသည်။ သာမန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Tim Cook၊ Bill Gates နှင့် Amancio Ortega တို့မဟုတ်ကြသော်လည်းယူရိုသန်းပေါင်းများစွာဝင်ငွေရကြသည်။ ၎င်းသည်အသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူမည်၊ မဝယ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲတော့မည့်ပိုက်ဆံပင်ဖြစ်သည်။ Apple ထုတ်ကုန်များအကြောင်းပြောဆိုပါ။ ပိုက်ဆံချွေတာရန်နှင့် gadget များအားအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုမှာအစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။
ဤအခန်းဆက်သင်ခန်းစာများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ "gadgets" ကိုမည်သို့စတင်မွမ်းမံကြောင်းတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပါမည် Mac စာအုပ် Pro။ ကျနော်တို့ကနေစတင်ပါလိမ့်မယ် HDD drive တစ်ခုကို SSD တစ်ခုဖြင့်အစားထိုးသည်.
SSD drives များသည်အစိုင်အခဲသိုလှောင်မှု disk များဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသည်သိမ်းဆည်းထားသောဒေတာကိုရယူသည့်အရှိန်သည် HDDs မှကမ်းလှမ်းသောအရာထက်များစွာသာလွန်သည်။ HDD များကဲ့သို့ပင် SSD များကိုမတူညီသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်းများကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဒီသင်ခန်းစာအတွက် ၂၅၀ GB ရှိတဲ့ Samsung SSD 850 EVO drive ကိုသုံးမယ်။ ဒီယူနစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရမ်းကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးတယ်။ ဈေးသက်သာတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ရှာနိုင်တယ် (စတိုးပေါ်မူတည်ပြီးယူရို ၇၅ မှ ၁၂၀ ကြား) ။ အထူးသဖြင့်ဒီ SSD ကိုအမေဇုံမှ ၈၅ ဒေါ်လာနဲ့အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးတယ်။ အခုငါတို့လုပ်နိုင်တယ် ဒီထက်ပိုပြီးယူရို ၈၀ ထက်မနည်းရောင်းပါ
ဒီသင်ခန်းစာအတွက် MacBook Pro 13 use (၂၀၁၂ ခုနှစ်အလယ်ပိုင်း) ကိုအသုံးပြုမယ်။ ပထမဆုံးလုပ်မှာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MacBook ၏နောက်ကျောဖုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်၎င်းကိုဇောက်ထိုးနေရာချကာ၎င်းတို့ကိုကိုင်ထားသည့်ဝက်အူတစ်ခုစီကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအပြန်အလှန်စွပ်စွဲလိုက်ကာ၎င်းတို့ကိုထုတ်ယူစဉ်အစဉ်လိုက်သိမ်းထားရန်ကြိုးစားသည်။
သူတို့ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်ကျနော်တို့ဂရုတစိုက်အဖုံးခွဲ။ အောက်ပိုင်းနှင့်ထိတွေ့ပါက Laptop ၏ဖြန့်ဖြူးမှုကိုတန်ဖိုးထားပါမည်။ ၎င်းသည်တစ်ချက်ကြည့်လျှင် Battery, HDD, SuperDrive, RAM စသည်တို့ကိုမြင်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့ HDD အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ HDD တွင်၎င်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာထုတ်ယူနိုင်သည့် tab တစ်ခုရှိသည်။ သို့သော်ပထမဆုံးအနေနှင့်အတွင်းပိုင်းအဆုံးတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်ပလတ်စတစ်ချုပ်ကိုင်မှုတစ်ခုကိုထုတ်ယူရမည်။
ကျွန်တော်အစတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်တူညီသည့်ဝက်အူလှည့်ကိရိယာကိုသုံးပြီး၎င်းကို fix သော2screw နှစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပြီး၊ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် HDD ကိုလွယ်ကူစွာဖယ်ရှားနိုင်သော်လည်း၊ Motherboard နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော flex ကိုမပျက်စီးစေရန်အတင်းမတိုက်ရန်အမြဲသတိထားနေရသည်။
ကျနော်တို့အနည်းငယ်အင်အားသုံးခြင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် zigzag လှုပ်ရှားမှုအောင်အားဖြင့်၎င်းကို disconnect ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် HDD ကိုဖယ်ရှားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ SSD အသစ်ကိုတပ်ဆင်သည်။ connector ကိုထည့်သောအခါဂရုစိုက်ပြီး Flex ကိုကွေးမပေးပါ။ အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောကြောင့်ငါ Flex ကိုအတင်းအကျပ်မပြုမိရန်အလွန်အလေးထား, သင်အမြဲ၎င်း၏ပုံသဏ္keepာန်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားရန်ရှိသည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းငယ်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်ဂရုတစိုက်နေရာချရမည်။ သင်က HDD ကဲ့သို့မချောင်ဘဲနေသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်မီလီမီတာပိုမိုကျယ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် HDD တွင်ကိုင်ထားသောအသုံးပြုထားသည့်ဘေးဘားများကိုမထားပဲလုပ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါတို့ပလတ်စတစ်ချုပ်ကိုင်မှုကိုထပ်မံထားရန်လိုသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ SSD အသစ်ကိုတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။ HDD ကိုသာအစားထိုးချင်ရင်နောက်ကျောဖုံးကိုသာအစားထိုးရလိမ့်မည်။
သင်၏အဆင့်မြင့် HDD နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်စွမ်းရည်ပိုမိုမြင့်မားသောအခြား HDD နှစ်ခုလုံးအတွက်သင့် standard HDD ကိုပြောင်းလဲရန်ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာနိုင်သည်ကိုသင်သတိရရန်သာကျန်သည်။
နောက်လာမည့်သင်ခန်းစာတွင် 4GB မှ 16GB အထိကျွန်ုပ်တို့၏ RAM ကိုပိုမိုကြီးမားသောတစ်ခုနှင့်အစားထိုးပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » သင်၏ MacBook Pro (I) ကိုမည်သို့ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းရမည်နည်း။ SSD ကိုတပ်ဆင်ပါ
ငါလုပ်ချင်သည်။ သို့သော်မည်မျှမြန်မြန်သွားသည်ဖြစ်စေ ၂၅၀ gb မှတ်ဥာဏ်ပျောက်ဆုံးခြင်းမရှိစေရ။ သိုလှောင်ထားနိုင်သည့် 250 gb ssd သို့မဟုတ်၎င်းသည်စျေးများစွာတက်နေသလား။ ထို့အပြင်၎င်းအားလည်းထည့်သွင်းနိုင်သည် DVD player ကိုဖယ်ရှားသည်မဟုတ်လော။
 ... ROB ...  ဟုသူကပြောသည်
အမှန်စင်စစ် Jimmy, 250GB SSD နှင့် 500GB တို့၏ကွာခြားချက်သည် + -100 €ခန့်ရှိသည်။ သို့သော်လက်ရှိစျေးလျှော့စျေးများကသင်စျေးသက်သာစွာရနိုင်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်များကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်သင်ခန်းစာ3တွင်အပိုဆောင်း HDD တစ်ခုထားရန် DVD drive ကိုမည်သို့အစားထိုးရမည်ကိုရှင်းပြပါမည်။ ဒီ 500GB သင်ခန်းစာမှာငါတို့ထုတ်ယူခဲ့တဲ့မူရင်းကိုသုံးမယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ပြန်သုံးကြတယ်။ မင်္ဂလာပါ။
Reply to  ... ROB ... to
ငါ့မှာ Macbook လို ၂၀၁၂ မှာရှိတယ်။ 2012G ram နဲ့ Intel 16G ssd ထားတယ်။ Macbook ကိုပြန်လုပ်တယ်။ ပျံတယ်။ ငါအရမ်းပျော်တယ်။ အသစ်ကဘာမှမတောင်းဘူး။
အိုလီဗာ Calvo Garcia ဟုသူကပြောသည်
Fantastic သင်ခန်းစာ၊ သို့သော် SSD အသစ်သည်အပျိုကညာဖြစ်သောကြောင့် disk များ၏အကြောင်းအရာကိုမည်သို့ပုံတူကူးယူမည်ကိုသင်စဉ်းစားပါက ပို၍ ပြည့်စုံလိမ့်မည်။
Oliver Calvo Garcíaအားပြန်ပြောပါ
gesture ထောက်လှမ်းမှုဆိုင်ရာ Apple မူပိုင်ခွင့်တင်ထားသည်
မတ်လသော့ချက်မှာအင်္ဂါနေ့ ၁၅ ရက်ဖြစ်သည်